Tonizia: Sivana lava izao! · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 09 Febroary 2010 6:56 GMT
Mafy lavitra noho ny tany aloha, toa lasa fitsipi-dalao mihitsy ao Tonizia ny sivana. Vavolombelon'ny ady napoakan'i Ammar (solonanarana nomena ny sivana Toniziana), izay nanivanivam-poana blaogy maro tapa-bolana lasa izao ny tontolon'ny fitorahana bolongana Toniziana.
Taorian'ny sivana nahazo ny blaogin-dry Fatma Arabicca sy Sofiene Chourabi, dia blaogy roa hafa indray no voasivana. Iray amin'izy ireny ny Free Jailed Tunisian students [Avoahy ireo mpianatra Toniziana voafonja], asehon'ny sary fàfana manaraka eto ambany:
Ny blaogy faharoa voasakana dia ny Nocturnal Thoughts . Ny sivana nihatra tamin'ity farany dia nahatonga onjam-panoherana teo amin'ny tontolon'ny fitorahana bolongana Toniziana.
Ghodwa Nahrek(Rahampitso, hifindra monina an-tsokosoko aho) dia nanoratra:
Nolazain'i Ammar fa tsy lanin'ny vavoniny mihitsy ny Nocturnal Thoughts [Fisaintsainan'ny Alina]. Aleony lavitra ny afternoon thoughts [Fisaintsainan'ny tolakandro]. Ny Nocturnal Thoughts, blaogin'ny namana sady rahalahinay Tarek Kahlaoui, dia voasivana rehefa nitoraka blaogy tsy nitsahatra nandritry ny telo taona momba ireo lohahevitra mahaliana sy mafampàna. Ao Tonizia, niakatra lenta ambonimbony kokoa ny hetiben'ny sivana. Tsy hoe endrika iray amin'ny famoretana sy ny famèrana ny fahafahana miteny fotsiny intsony fa lasa medaly sy sertifika ho an'ny mpitoraka blaogy, noho ny sivana mampivoitra ny lanjan'ilay blaogy ary ny maha-zava-dehibe ireo lohahevitra velabelarina ao aminy. Fiarahabana manokana atolotra ny namanay Tarek ary Tongasoa indray eo anivon'ireo blaogy voarara.
Matrka( Kanonta- [Hammer]) nitoraka blaogy nanao hoe:
Mampifandray olona maro ireo Blaogy ary mitombo isan'andro ny tanjany. Nocturnal Thoughts, blaogin'i Tarek Kahlaoui, dia blaogy iray isan'ny tsara mendrika ho vakiana. Tsy ny tsirairay no hitovy hevitra tanteraka amin'i Tarek momba ny lohahevitra toy itsy na toa izatsy. Tarek dia afaka manana ny fomba fijeriny manokana miohatra amin'ny an'ny tsirairay. Saingy ny sivana nahatra tamin'ny blaoginy dia fahavoazana iray. Mazava loatra, fahavoazana ho an'ireo izay mpamaky sy liana amin'ny vakiteny, ary ny fanivànana azy dia fihetsika nilaozan'ny toetr'andro ka ny toerana sahaza hisy azy dia ny fiandohan'ny taonjato faha-20…
Hoy i Samsoum mitoraka blaogy amin'ny lohateny hoe Tsy zakan'i Ammar ireo fisainana sy ireo mpisaina, indrindra indrindra fa ireo izay mitoraka bolongana momba izay fisaintsainana nentin'ny alina ho azy ireo:
Tsy mety mino aho hoe voarara ny blaogin'i Tarek Kahlaoui satria adinoko fa ”Ammar ilay hetibe“ dia tsy hanaraka ny lojika tokony ho izy any an-kianjan'ny sivana. Angamba hitany fa ny lohahevitra dia nisy fampisaintsainana sy resaka mananosarotra ary dia nanapa-kevitra ny hisoroka avy hatrany izay mety ho vokany izy ka nandrara ilay blaogy avy hatrany sy nikarotra izay tohan-kevitra ho entina manamarina ilay sivana taty aorian'izay.
Arahaba tongasoa ato anatin'ny klioban'ireo mpitoraka blaogy voarara ry Tarek ary manantena aho fa ireo asa fampihorohoroana ataon'i Ammar, dia hanome tosika anao hanazava aminay bebe kokoa ny fisaintsainanao mihoatra lavitra noho ny teo aloha. Ary misokatra foana ho anao ny blaogiko dieny mbola tsy mifantoka aminy ny sain'i Ammar.
Menatra sy sorena ny tsirairay rehefa nahalala fa hoe nisy profesora iray nanoratra tamina gazety vahiny ary mampianatra tantaran'ny zavakanto any ivelany voasivana ao amin'ny fireneny ihany satria sahy namoaka ny eritreriny.